I-mullet ebomvu yombala womboniso | Ngeentlanzi
Nangona i-mullet ingezizo iintlobo ezifanelekileyo zokuzalela kwi-aquarium. Kodwa, yakhe Umbala womboniso wenza ukuba ube nawo kwi-aquarists. Kuya kufuneka uyithathele ingqalelo into yokuba unayo kwi-aquarium yobukhulu obukhulu ngenxa yobungakanani obuqwalaselweyo obufikelela kubudala bayo obuvuthiweyo. Bafikelela kubukhulu beesentimitha ezingama-30.
I-mullet inomlomo obeka iindevu ezimbini. Ebonisa indlela abatya ngayo. Ngaba kunjalo idityaniswe ne-substrate kunye neebhotile zesanti apho ikhangela khona kwaye imbe nzima kakhulu ukuba ixwaye ixhoba layo.
Inomzimba we-burgundy ngaphambili kunye nephuzi ngasemva, yahlulwe ngebhanti emhlophe. Kukho ichaphaza elimnyama ngasemva kunye nemigca emhlophe emibini ngaphambili. Intloko nomsila nazo zinophawu oluhlaza okwesibhakabhaka.
Kwii-aquariums zomthamo othile apho kugcinwa khona iintlanzi ezininzi, olu hlobo lombala womboniso luluncedo olukhulu kuyo isenzo esiqhekezayo kwintsalela yokutya okusele kungcwatyiwe. Ubuncinci bobukho be-detritus kunye nokuhlala kwezinto eziphilayo kwi-substrate kuya kuvumela ukuncitshiswa okubalulekileyo kweemveliso ze-nitrogen kuyo. Kungoko kunokuthiwa iyayicoca into eyenziwayo kwi-aquarium.
Nangona oku Umsebenzi wokucoca uluncedo kakhulu nakweyiphi na i-aquarium ayisiyondidi ixhaphakileyo kwiilwandle zasemanzini. Nangona kancinci kancinci iyaziswa njengeyinto entsha. Inesingqisho sebhayoloji esiphakamileyo kakhulu ukuze kwisithuba seentsuku ezimbalwa siyitshabalalise yonke imicroanauna egcwalise umhlaba.
Indawo yayo yendalo
Olu hlobo luhlala eNtshona Pacific. Ukusuka eMalucas nakwiiPhilippines ukuya kwiNtshona Samoa, iIyukyu Islands, iNew Caledonia, iTonga, iPalau. IiCarolinas kunye neMarshall Islands. Inxulunyaniswa neebhotile zesanti ezikufutshane nemimandla yolwandle. KUNYEIyakwazi ukuhlala kwiimitha ezingama-40 ubunzulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Umbala we mullet onombala